၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ သက်သာလှသောဝယ်ခွန်ဖြင့် အိမ်ပိုင်ဆိုင်နိ်ုင်ဖုိ့ iMyanmarHouse.com မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် မြန်မာ့အကြီးဆုံးအိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကြီး - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ သက်သာလှသောဝယ်ခွန်ဖြင့် အိမ်ပိုင်ဆိုင်နိ်ုင်ဖုိ့ iMyanmarHouse.com မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် မြန်မာ့အကြီးဆုံးအိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကြီး
5 Dec 2019 3:34 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
1413 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူသူများအတွက် ၃% အထိ ၀ယ်ခွန်များ လျှော့ချပေးနေပြီကို မိဘပြည်သူများ သိပြီးပါပြီလား? အေးစက်နေတဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို ပြန်လည်လှုပ်ခတ်လာရန် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ကြိုးစားမှုနှင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၀ယ်ခွန်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အောက်ပါအတိုင်း လျော့ချပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
ဝယ်ခွန်သက်သာခွင့်များသည် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ (၁)ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ (၃၀) ရက်အထိသာ အကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်က အိမ်ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပြီး အခွန်နှုန်းထားများကြောင့် မှတ်ပုံမတင်လိုခြင်း ၊ အမည်မပြောင်းလိုခြင်းများအတွက် ယခုအချိန်က သင့်အိမ်မက်ကိုအကောင်ထည်ဖော်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။ မိမိတစ်နိ်ုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ အိမ်ပိုင်ဆိ်ုင်လိုသူများအတွက် အိမ်ရာချေးငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါက အခြေခံလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမှာ...
- ဝင်ငွေရကြောင်း သက်သေ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြို့နယ်စုံမှာရှိတဲ့ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ လုံးချင်းအိမ်များကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိ်ုင်ရန် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပေါင်း (၅၀) ကျော် တို့ပါဝင်ပြသရောင်းချမဲ့ iMyanmarHouse.com ၏ (၁၂) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးအိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကြီးကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ၊ ၇ ၊ ၈ ရက်များတွင် တပ်မတော်ခန်းမမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့အကြီးဆုံးဘဏ်ကြီး(၄)ခုမှလည်း အိမ်ရာချေးငွေများကို တစ်ထိုင်တည်းလျှောက်ထားနိုင်ရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
ဒါ့ကြောင့် ယခုအချိန်က အိမ်ဝယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ထပ်မစောင့်ပါနဲ့တော့ ။ ယခုလို သက်သာလှတဲ့ အခွန်နှုန်းထားများနဲ့အတူ အိမ်ရာချေးငွေများကို ရယူပြီး သင့်စိတ်ကူးထဲက အိမ်ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတော့...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး အိမ်ခြံမြေအရောင်းပြပွဲကြီး (၁၂ ကြိမ်မြောက်)
ကျင်းပမည့်ရက် - (၆) ရက် မှ (၈) ရက် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၊ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် (သောကြာ ၊ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ)
ကျင်းပမည့်အချိန် - နံနက် (၉) နာရီ မှ ညနေ (၅) နာရီအထိ။
ကျင်းပမည့်နေရာ - (တပ်မတော်ခန်းမ) ၊ ဦးဝိစာရလမ်း ၊ ရန်ကုန်မြို့။
မည်သူမဆို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက iMyanmarHouse.com ၏ Hot Line Number : 09 – 455294841~5သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အိမျခွံမွဝေယျယူသူမြားအတှကျ ၃% အထိ ဝယျခှနျမြား လြှော့ခပြေးနပွေီကို မိဘပွညျသူမြား သိပွီးပါပွီလား? အေးစကျနတေဲ့ အိမျခွံမွဈေေးကှကျကို ပွနျလညျလှုပျခတျလာရနျ လုပျငနျးရှငျမြား၏ကွိုးစားမှုနှငျ့ နိုငျငံတျော၏စီးပှားရေးကိုတဈဖကျတဈလမျးက အထောကျအကူပွုစရေနျရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ဝယျခှနျမြားကို နိုငျငံတျောအစိုးရမှ အောကျပါအတိုငျး လြော့ခပြေးလြှကျရှိပါတယျ။
တဈကပျြ မှ သိနျးတဈထောငျအထိ ၃%
သိနျးတဈထောငျ့တဈကပျြ မှ သိနျးသုံးထောငျအထိ ၅%
သိနျးသုံးထောငျတဈကပျြ မှ သိနျးတဈသောငျးအထိ ၁၀%
သိနျးတဈသောငျးတဈကပျြ မှ သိနျးသုံးသောငျးအထိ ၁၅%
သိနျးသုံးသောငျးတဈကပျြ နှငျ့ အထကျ ၃၀%
ဝယျခှနျသကျသာခှငျ့မြားသညျ ၂၀၁၉ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာ၊ (၁)ရကျနမှေ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာ၊ (၃၀) ရကျအထိသာ အကြိုးသကျရောကျမှာဖွဈပါတယျ။
ယခငျက အိမျဝယျဖို့စိတျကူးရှိပွီး အခှနျနှုနျးထားမြားကွောငျ့ မှတျပုံမတငျလိုခွငျး ၊ အမညျမပွောငျးလိုခွငျးမြားအတှကျ ယခုအခြိနျက သငျ့အိမျမကျကိုအကောငျထညျဖျောဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါ။ မိမိတဈနိုငျတဈပိုငျဝငျငှနေဲ့ အိမျပိုငျဆိုငျလိုသူမြားအတှကျ အိမျရာခြေးငှဖွေငျ့ ဝယျယူလိုပါက အခွခေံလိုအပျသောစာရှကျစာတမျးမြားမှာ
- ဝငျငှရေကွောငျး သကျသေ တို့ဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ မွို့နယျစုံမှာရှိတဲ့ တိုကျခနျး၊ ကှနျဒို၊ လုံးခငျြးအိမျမြားကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြနိုငျရနျ ဆောကျလုပျရေးကုမ်ပဏီပေါငျး (၅၀) ကြျော တို့ပါဝငျပွသရောငျးခမြဲ့ iMyanmarHouse.com ၏ (၁၂) ကွိမျမွောကျ မွနျမာနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံးအိမျခွံမွအေရောငျးပွပှဲကွီးကို ဒီဇငျဘာ ၆ ၊ ၇ ၊ ၈ ရကျမြားတှငျ တပျမတျောခနျးမမှာကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာ့အကွီးဆုံးဘဏျကွီး(၄)ခုမှလညျး အိမျရာခြေးငှမြေားကို တဈထိုငျတညျးလြှောကျထားနိုငျရနျ တိုငျပငျဆှေးနှေးပေးပါမယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ယခုအခြိနျက အိမျဝယျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ ထပျမစောငျ့ပါနဲ့တော့ ။ ယခုလို သကျသာလှတဲ့ အခှနျနှုနျးထားမြားနဲ့ အတူ အိမျရာခြေးငှမြေားကို ရယူပွီး သငျ့စိတျကူးထဲက အိမျကိုဝယျယူလိုကျပါတော့...
မွနျမာနိုငျငံ၏ အကွီးဆုံး အိမျခွံမွေ အရောငျးပွပှဲကွီး (၁၂ ကွိမျမွောကျ)
ကငျြးပမညျ့ရကျ - (၆) ရကျ မှ (၈) ရကျ ၊ ဒီဇငျဘာလ ၊ ၂ဝ၁၉ ခုနှဈ (သောကွာ ၊ စနေ ၊ တနင်ျဂနှေ)
ကငျြးပမညျ့အခြိနျ - နံနကျ (၉) နာရီ မှ ညနေ (၅) နာရီအထိ။
ကငျြးပမညျ့နရော - (တပျမတျောခနျးမ) ၊ ဦးဝိစာရလမျး ၊ ရနျကုနျမွို့။
မညျသူမဆို အခမဲ့ တကျရောကျနိုငျပါသညျ။
အသေးစိတျသိရှိလိုပါက iMyanmarHouse.com ၏ Hot Line Number : 09 – 455294841~5သို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျကွောငျး အသိပေးအပျပါသညျ။
ကွန်ဒိုမီနီယံ တိုက်ခန်း ချေးငွေ အခွန် လုံးချင်း ဘဏ် အိမ်ခြံမြေ အိမ်ရာ အရောင်းပြပွဲ
ပင်းတယ | ရှမ်းပြည်နယ်